လိင် - အသိုင်းအဝိုင်းသတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
တရားမ ၀ င်မွေးဖွားခြင်းအတွက်သန့်ရှင်းရာဌာနမြို့တော်များသည်တရားရုံးချုပ်ကိုချိုးဖောက်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ငါကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆန့်ကျင် rants နှင့်နောက်တော်သို့လိုက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရတဲ့အကြောင်းပြချက်, ဘာသာတရားကြောင့်သူတို့မိန်းမတို့အားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချငြင်းပယ်နိုင်သည်ဟုဆိုကာလူတွေကိုလိုက်နာခဲ့ကြသည်။ မိန်းမကြောင့်ဖြစ်သလော
Transphobic Radio Host သည်လိင်ကွဲပြားမှုအားတားဆီးခြင်းအားတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုငြင်းပယ်သည်
ဇန်နဝါရီလ 21, 2020 ဇန်နဝါရီလ 21, 2020 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ငါရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာပရက်တ်က“ Podcast နောက်တစ်ခုကို“HD83 - ဒီမိုကရက်ပါတီကဝေဖန်မှုမခံရဘူးလို့စွပ်စွဲခံရသူ။ "
ပထမ ဦး စွာသူက“ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ podcast မှာငါဟာနှိပ်စက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။Wiccan, ယောက်ျားသည် Snyder တွင်အမျိုးသမီးအဖြစ်နေထိုင်သော၊ Texas 'HD83 အတွက်ပြေးသည်။ "
ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါး၌ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျား၊ မခွဲစိတ်မှုသည်တကယ့်ပြissueနာဖြစ်သည်။ သူကကျွန်ုပ်ကို“ တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းစွာပြုမူခြင်း” ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အခွင့်အရေးများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Lubbock ရေဒီယိုအိမ်ရှင်သည် Transgender ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားဆန့်ကျင်ပြီးသည့်နောက်ဒေသခံတရားဟောဆရာသည်တိုက်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်
ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ဒီနေ့အစောပိုင်း တစ် ဦး က Lubbock transphobic ရေဒီယိုပြပွဲအိမ်ရှင် ကျနော့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမူဝါဒထက်မက၊
သို့သော်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံအားပေးသူတစ် ဦး ထံမှ Freethought Equality Fund PAC ကိုတည်ထောင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် Odessa Pride နှင့် Lubbock Pride မှ Baptist Church တရားဟောဆရာနှင့် Lubbock Pride တို့မှ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့ရက်၏အစသာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာကျွန်တော့်ကြေငြာချက်ကစပြီးကျွန်တော့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုပြန်စခဲ့ပါတယ်။
Lubbock မှ Transfobic Radio Hosting သည်လိင်ပြောင်းလဲသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားတိုက်ခိုက်သည်
ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ဒီ PodCast တွင်မစ္စတာပရက်ဘလဲတနီသည်သူ၏လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူခြင်းနှင့် transphobic သဘောသဘာဝကိုသူ၏စကားများဖြင့်ဖော်ပြကာနာကျင်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီပြconfrontနာကိုရင်ဆိုင်ချင်တယ်။
သူက“ မိန်းမဖြစ်ယောင်ဆောင်သောသူတယောက်” ဟုဆိုသည်။ ရင်ဘတ်၌ transphobic လာကြတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့, GENDER DYSPHORIA အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးဟန်ဆောင်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျားမခွဲစိတ်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလိင်နှင့်ကျားမရေးရာဝိသေသလက္ခဏာများအကြားကွဲလွဲမှုရှိနေသောကြောင့်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်အဆင်မပြေမှု (သို့) စိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုခံစားရသည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျား၊။ လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများအကြားဤမတိုက်ဆိုင်မှုသည်ကျား၊ မခွဲစိတ်မှုဟုခေါ်သောစိတ်သောကရောက်စရာနှင့်မသက်မသာခံစားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျားမခွဲစိတ်မှုသည်ဆေးကုသမှုခံယူသည့်အခြေအနေဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင့်လျော်သောကုသမှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ရောဂါမဟုတ်ဘူး လေ့လာမှုတစ်ခုအရ (နမူနာ ၃၁၄ ခုမှလူ ၇ ယောက်ကို အခြေခံ၍) GID သည် ၆၂% မှမျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပြီးမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုဖော်ပြသည်။ ဤကိစ္စများတွင်။ ကျား dysphoria အမျိုးသမီးခွဲစိတ်မှုပေါင်း ၃၀၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်နှင့်အမျိုးသမီး ၁၀၀၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများတွင်ပြသခဲ့သည် ကျား dysphoria ၇၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်တွင်ယောက်ျားလေးမွေးသူနှင့် ၅၀,၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်တွင်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည်။
ပConိသန္ဓေယူခြင်းအကြောင်းထိပ်တန်း ၇ ဒဏ္Myာရီများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 ဇန်နဝါရီလ 15, 2020 Stella Hawar	မှတ်ချက် Leave
လူအများအပြားသည်ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်ပြည့်လျှံနေသည်။ မှန်သည်၊ မှားသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်လူတိုင်းသည်ထင်မြင်ယူဆခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသာမန်ဒဏ္aboutာရီများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်အရေးကြီးသည်။
ဖုံးကွယ်ထားသောဒဏ္conceာရီ ၇ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသစဉ်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အချိန်ယူပါ။
၈ Hepatologist နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သင်လိုအပ်သောသတိပေးလက္ခဏာများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 3, 2020 ဇန်နဝါရီလ 6, 2020 Sylvia J ကို	မှတ်ချက် Leave
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - အသည်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ (အသည်းကင်ဆာ)
ဝမ်းဗိုက်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသောအသည်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာဟာရဓာတ်များကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်သောဓာတုဗေဒများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသည်းမှထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သောပရိုတိန်း။
သင်၏လိင်တူဆက်ဆံသူမိတ်ဆွေ / GF / BF နှင့်ခရီးသွားစဉ်စဉ်းစားရမည့်အရာများ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2019 ရော်ဘင်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
လိင်တူဆက်ဆံတာဟာသဘာဝပဲ။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်ကလူအများစုအတွက်တော့ဒါဟာထူးဆန်းတယ်။ သူတို့ကလိင်တူဆက်ဆံသူကိုလုံးဝမုန်းတယ်လို့ပြောနိုင်တယ် သူတို့ဟာဒီလူကိုသူတို့ဒေသမှာမတွေ့ချင်ဘူး၊ ဒါကသဘာဝပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကဒီလောကမှာမတူကွဲပြားတဲ့အပြင်သူတို့မှာအမုန်းတရားနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတယ်။ သင်သည်သင်၏ဒေသသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်တွင်ဤအရူးလူများကိုမတွေ့ရသော်လည်းအခြားနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုသို့သို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူခရီးသွားစဉ်ဤအမျိုးအစားများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 14, 2019 နိုဝင်ဘာလ 13, 2019 Madhavi Vudayagiri	မှတ်ချက် Leave
ဆံပင်ကိုပွတ်သပ်ခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆံပင်ကျလာတာနဲ့အမျှယောက်ျားအနည်းငယ်ဟာသူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုလျော့သွားပြီ၊ ဤသူသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးသည့်စိတ်ထားဖြင့်ဆံပင်အပြည့်အဝအစားထိုးခြင်းကိုရှာဖွေသည်။ ဆံပင်ပြန်လည်ကြီးထွားမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ပင်ပန်းစွာသုံးစွဲခြင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးသားများသည် Rogaine၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြီးအကျယ်ဆိုးရွားသောအဖြစ်ဆိုးကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက် extension များကိုသော့ခတ်ထားခြင်းများပင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
LGBT + ပြ+နာများ - LGBTQ + သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူမှုကျန်းမာရေးအပေါ်မည်သို့သြဇာသက်ရောက်သနည်း
နိုဝင်ဘာလ 11, 2019 နိုဝင်ဘာလ 11, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
LGBT + အသိုင်းအဝိုင်း၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်း (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၈ နှစ်ရှိလိင်လိင်တူဆက်ဆံသူ)၊ ကျွန်ုပ်သည်အမုန်းတရား၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြshareနာများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီကိစ္စကအမေရိကားမှာရှိတဲ့လိင်တူချစ်သူတွေနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြisနာပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ မုန်းတီးမှု၊ စကားလုံးများ၊ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပြandနာများနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုကင်းမဲ့ခြင်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 31, 2019 အောက်တိုဘာလ 31, 2019 ယခုဂုဏ်သိက္ခာ	မှတ်ချက် Leave
ယူဂန်ဒါသည်ဥပဒေပြa္ဌာန်းလိုသည် လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုသေဒဏ်ပေးနိုင်သည်။ ယူဂန်ဒါအစိုးရကကြေငြာခဲ့သည်။ ဥပဒေသစ်သည်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်အရှေ့အာဖရိကတိုင်းပြည်တွင်“ သဘာဝမဟုတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုများမြင့်တက်လာခြင်း” ဟုဖော်ပြသည့်အရာကိုတားဆီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကဤအစီအစဉ်သည်လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်ပြောင်းလဲသူများအားအကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။
အမေရိကတစ်လွှားလိင်မှူးများအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခြင်း - တန်းတူရေးကျရှုံးပြီ
အောက်တိုဘာလ 23, 2019 အောက်တိုဘာလ 22, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ငါအရင်ကအကြောင်းကိုရေးထားပြီ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိလိင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့မရှိခြင်း) နှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိလိင်ပြောင်းလဲသူများ၏အခက်အခဲများ, တဖန်ငါဒီနေရာမှာဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပိုမိုရေးသားနေပါတယ်။ LGBT တစ် ဦး ချင်းစီ၏နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်များပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖြစ်အပျက်များကိုဆက်လက်လေ့လာပါမည်။
Texas ရှိ Transgender တစ်ယောက်၏အခက်အခဲများ
အောက်တိုဘာလ 5, 2019 အောက်တိုဘာလ 4, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်လိင်ကွဲပြားသည့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအလားအလာသည်သိသာထင်ရှားသော်လည်းတက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားစိုးရိမ်မှုများမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမလွှဲမရှောင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤအရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်၊ LGBT အသိုင်းအဝိုင်း၊ အထူးသဖြင့် Transgender များနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကိုပြည်သူလူထုနားလည်စေရန်ကျွန်ုပ်လိုလားသည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိလိင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့မရှိခြင်း)
စက်တင်ဘာလ 30, 2019 စက်တင်ဘာလ 29, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
Medicaid (သို့) အခွန်ထမ်းအာမခံမူဝါဒများအတွက်ပေးချေရန်သို့မဟုတ်ဖုံးအုပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Facebook ရေးသားချက်များ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်မှတ်ချက်များမြောက်မြားစွာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ကျားမခွဲခွဲစိတ် လိင်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့နှင့်လိင်သူတို့ခွဲစိတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်သူတို့သည်အခွန်ပေးဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လိင်ပြောင်းလဲသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ Texas Medicaid သည်တစ်ခါတစ်ရံအသက်ကယ်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကိုအမှန်ပင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ သို့သော်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိမည်သည့်ဆေးခန်းမျှဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် Medicaid ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအပြစ်ရှိသောတရားဟောဆရာသည်မာနထောင်လွှားခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်း - ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်ဖြစ်ရပ်ကကယ်တင်ခြင်း!
သြဂုတ်လ 27, 2019 သြဂုတ်လ 28, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သောတရားဟောဆရာ (စက်တင်ဘာ 1၊ သူလူသိရှင်ကြားမဖြစ်စေရန်အမည်ခံ။ သိမ်းဆည်းခံရရန်) စက်တင်ဘာ 2017၊ XNUMX၊ Lubnock Pride တွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်သူများကသူ့ကိုငြင်းခဲ့သည်။
သူနှင့်အခြားဆန္ဒပြသူနှစ် ဦး သည်စာဖတ်ခြင်းလက္ခဏာများကိုသယ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
သခင်ယေရှုက“ ... ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
အကယ်၍ မင်းကဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပေးပါလိမ့်မယ်။
မိန်းမ! မင်းရဲ့ယော Wolf ကမင်းကိုစကားပြောနေတာကိုနားထောင်ပေးပါ
သြဂုတ်လ 24, 2019 သြဂုတ်လ 24, 2019 Susan Simpsons	မှတ်ချက် Leave
ယော Wolf ကသူပိုင်ရှင်မှပြောသော။ ယေဘုယျအားဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်သင်၏သက်ဆိုင်ရာ Vaginas များကိုအမြဲနားထောင်ရန်သင်ယူကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ p * ssy ကစကားပြောတယ်၊ ပြောတဲ့အခါလုံလုံလောက်လောက်အသံထွက်တယ်။ အားလုံးသည်အဆင်မပြေသောအခါအရိပ်အမြွက်ပြောသောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများအမြဲရှိသည်။ ၎င်းသည်ယောနိ၏စကားသည်တစ်စုံတစ်ရာသည်ရှုပ်ထွေးနေပြီးဖြစ်သည်ဟုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံး၏တောင်ဘက်သို့အဆင်မပြေသောအခါသင်၏ Vagina အချက်ပြမည့်လက္ခဏာအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ချိုသောယော Wolf က - လူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်
သြဂုတ်လ 23, 2019 သြဂုတ်လ 22, 2019 Susan Simpsons	1 မှတ်ချက်
အမျိုးသမီးများသည်သူတို့လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့် ပတ်သက်၍ အတင်းအဖျင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည် သနားခြင်း ကောင်းမွန်သောအရွယ်ရှိသည့်လိင်တံနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အပြည့်အဝကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်သည့်အပြင်ယောက်ျားလေးများ၏ကလပ်အသင်းရှိအမျိုးသားများသည်သူတို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်အရူးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောချိုမြိန်။ စိုစွတ်။ တင်းရင်းသောယောနိကိုသူတို့ဘဝသို့မည်သို့ရောက်ရှိစေခဲ့သည်ကိုအံ့အားသင့်စွာပြောပြကြသည်။ , သူတို့ကိုပိုပြီးစွန့်စားမှုအဘို့အပြန်လာမယ့်ထားရှိမည်။
ယောနိခန်းခြောက်ခြင်း - အကြောင်းရင်းများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
အမျိုးသမီးအတော်များများသည်လိင်အင်္ဂါခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားကြရပြီး၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏လိင်ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လိင်အင်္ဂါခြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာပြေပြစ်သောပျော်စရာကောင်းသောကြောင့်ချောမွေ့။ ပျော့ပျောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောဆီများမလွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂါဇာတ်ခြောက်သွေ့ ယောနိကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးသောအခန်းကဏ္whichတွင်ပါဝင်သောအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်မျက်နှာပျက်ကြောင်းမျက်နှာပျက်နေသည်။ အမျိုးသမီးများစွာသည်သွေးဆုံးပြီးနောက်အများအားဖြင့်ခြောက်သွေ့မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ကိုယ်ခန္ဓာမှအက်စထရိုဂျင်လုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်သောအမျိုးသမီးငယ်များသည်လည်းမိန်းမအင်္ဂါခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။
သြဂုတ်လ 20, 2019 သြဂုတ်လ 20, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
သင်းအုပ်ဆရာအချို့သည်ဆိုးညစ်သောအယူအဆများဖြင့်ကျမ်းစာနှင့်ဘာသာတရား၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရှိသည်။ ငါ၏အယခင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် လိင်တူချစ်သူများအရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မသိသောသူများကလိင်တူချစ်သူများကိုမုန်းတီးကြသည်LGBT ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပညာမတတ်သူများ၏နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်ပြသထားသောမုန်းတီးမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ ဒီ post ကို LGBT တစ် ဦး ချင်း၊ Pride အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒေသခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်ထောက်ခံသူများကလျင်မြန်စွာမျှဝေခဲ့ကြသည်။ ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေမျှလိုက်တာနဲ့ဒီဟာကအုပ်စုတွေနဲ့လိင်တူချစ်သူဆန့်ကျင်သူတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့စိစစ်မှုကိုခံယူထားပါတယ်။
လိင်တူချစ်သူများအရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မသိသောသူများကလိင်တူချစ်သူများကိုမုန်းတီးကြသည်
သြဂုတ်လ 14, 2019 သြဂုတ်လ 14, 2019 Addison ပယ်ရီ -Franks	မှတ်ချက် Leave
ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်၊ တိုင်ပင်မှူးမဟုတ်၊ ဆရာမဟုတ်ပါ။ ငါ့မှာပါရဂူဘွဲ့မရဘူး ဤရွေ့ကားကျနော့်အမြင်နှင့်အတူလိင်တူချစ်သူများတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်လူသိရှင်ကြားလူသိများနှင့်အစီရင်ခံစာများရိုးရှင်းစွာဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာ LGBT ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်ရုန်းကန်နေရသောအခက်အခဲများကိုလူတို့အားသိစေရန်သတင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါးမျှသာဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်မုန်းတီးမှုနှင့်နာကျင်မှုကိုခံနေရသော်လည်းဤလူများအားလိင်တူချစ်သူများအဖြစ်လူအများကဘာကြောင့်တွန်းအားပေးသနည်း။
ရှုပ်ထွေးသောလိင် - ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါ
သြဂုတ်လ 14, 2019 သြဂုတ်လ 13, 2019 ဇွန်လ Stepansky	မှတ်ချက် Leave
ပထမနှင့်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်သည်အစာစားခြင်း (သို့) အိပ်ခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအခြားကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့နားလည်မှုနှင့်အတွေးများဖြင့်ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစာစားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းအလေ့အထများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဖိအားများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုများနှင့် (နောက်ဆုံးတွင်အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ် anorexia ဖြစ်လာနိုင်သည့်) စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်ပုံပျက်ဖြစ်လာသကဲ့သို့လိင်၊ ဤအလွန်အခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်မှုသည်ဤအရာများဖြင့်ပင်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်သည် ဖိအားများ - လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏တန်ဖိုးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူ့လိင်ကိုဆက်လက်ပုံဖော်နေဆဲဖြစ်သောခိုင်လုံသောထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း
သြဂုတ်လ 10, 2019 သြဂုတ်လ 11, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သူဌေးကြီး ဂျက်ဖရီ Epsteinကလေးလိင်ရောင်းဝယ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသူ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေ ဒေသခံမီဒီယာများမှဖော်ပြချက်အရသူသည်ထိန်းသိမ်းထားသည့်နယူးယောက်ထောင်တွင်ဖြစ်သည်။ Epstein ရဲ့အလောင်းကိုစနေနေ့မနက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လကုန်ခါနီးတွင် Epstein ကိုသူ၏လည်ပင်းတွင်အမှတ်အသားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယောနိအနံ့ - ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများနှင့်ရိုးရှင်းသောအိမ်သုံးကုထုံးများ
သြဂုတ်လ 8, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Susan Simpsons	3 မှတ်ချက်
သင့်ရဲ့ယောနိသည်နံနံစေးနေသလား။ ပိုဆိုးတာကယောနိကအနံ့ခံတယ်လို့ပြောဖူးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနားယူပါ။ အားလုံးထူးဆန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သင်၏ယောနိသည်ပုံမှန်ထက်အနံ့ထူးခြားသည့်အရာရှိလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုသတိပေးမှုတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါအခေါင်း အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်နံနေပေမည်။ ကောင်းပြီ၊ သင့်ကိုလုံးဝရှူရှိုက်ခွင့်မပေးသည့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများ ၀ တ်ထားဖူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဟော်မုန်းများမမျှတနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း။
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးများအား Vitro မြေသြဇာရရှိစေရန်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုတားဆီးရန်ပြင်သစ်ဥပဒေ
သြဂုတ်လ 5, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သမ္မတ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ပြင်သစ်အစိုးရ Emmanuel macron bioethics အပေါ်တစ် ဦး ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဥပဒေတွင်အတုသုတ်သင်ခြင်းကဲ့သို့သောကုသမှုများကိုရရှိနိုင်သူများ၏စာရင်းကိုတိုးချဲ့ခြင်းပါဝင်သည် စသည်တို့ fertilization အတွက်. လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရှိသည့်တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများသည်ကလေးမွေးရန်ပြည်ပသို့သွားစရာမလိုတော့ပါ။ အတည်ပြုပြီးပါကအဆိုပြုထားသည့်ဥပဒေသည်၎င်းတို့အားမျိုးပွားနိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ယောက်ျားများသည်မိန်းမငယ်များကိုအဘယ်ကြောင့်နှစ်သက်ကြသည့်အကြောင်းရင်း ၁၁ ချက် - ငွေသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 4, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 luisa Hilburn	မှတ်ချက် Leave
အသက်အရွယ်၏မေးခွန်း ... ၎င်းသည်အရေးမကြီးသောနံပါတ်လောသို့မဟုတ်၎င်းထက်အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသလော။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရန်ခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာစုံတွဲများစွာသည်အသက်ကွာခြားမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိသည့်စုံတွဲများ၏ပုံပြင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ဝိုင်း၊ မီဒီယာသို့မဟုတ်နာမည်ကြီးများကြားတွင် Legion ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကပုံမှန်လား။ သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအတွက်သံသယမရှိပါဘူး။ သို့သော်သတိပြုရမည့်အချက်မှာယောက်ျားသည်အများအားဖြင့်အသက်ကြီးပြီးမိန်းမသည်ငယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤသဘောမျိုး၌အစဉ်အမြဲဖြစ်သနည်း ယောက်ျားသည်မိန်းမထက်ကြီး။ ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်သောစုံတွဲများကိုအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသနည်း။ အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲ။ အမျိုးသမီးများသည်လူကြီးများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆက်ဆံလိုကြသနည်းဟုသင်တွေးမိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ယောက်ျားတွေကသူတို့ထက်ငယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ဘာကြောင့်ကြိုးစားကြတာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မေးခွန်းကပို။ ပို။ ပေါ်ပေါက် အသက်အရွယ်မညီမျှမှု မကြာခဏအလွန်အရေးကြီးလှသည်။
မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရယောက်ျားများသည်မိန်းမငယ်များကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည့် 11 အကြောင်းရင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 24, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	1 မှတ်ချက်
သုတေသီများကတနင်္လာနေ့က“ ၂၀၂၃ ခုနှစ်နောက်မှမဟုတ်ဘဲ” သူတို့သည်ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးကိုစတင်ဖြန့်ဝေမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် လူ့ခုခံအားကျဆင်းမှုဗိုင်းရပ်စ် (HIV)ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုသည်အနည်းဆုံး ၆၅% ကိုရပ်တန့်စေလိမ့်မည်။ သူတို့က၏မူဘောင်၌အတည်ပြုခဲ့သည် မက္ကဆီကိုရှိ 10th ကမ္ဘာ့သိပ္ပံဆိုင်ရာညီလာခံ။ 3,800 လူများကိုပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလာမည့်လများတွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စတင်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
အမြိုးသမီးမြားစစ်ပြန် - ငါတို့စစ်ရေးသမိုင်း၏ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား
ဇူလိုင်လ 23, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့နိုင်ငံ၏စစ်ရေးသမိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးချင်တဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်လမ်းခင်းပေးပြီးပwomenိပက္ခဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေလိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့အမျိုးသမီးတွေပါ ပcrisisိပက္ခတိုင်းနှင့်စစ်ပွဲတိုင်း၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အမြဲတမ်းရှိခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကမှသာသူတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးတန်ဖိုးထားခဲ့သည်။
လိင်တူချစ်သူအပေါ်အစ္စရေးပညာရေး ၀ န်ကြီး။
ဇူလိုင်လ 17, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး၏ပညာရေးအကြီးအကဲသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့်ကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲများ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကဒီကြေငြာချက်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပေမယ့် ၀ န်ကြီးတစ် ဦး ကိုထုတ်ပယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လက္ခဏာမရှိပါဘူး။ တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေး၌ဆန္ဒပြမှုများသည်ပညာရေး ၀ န်ကြီး Rafi Peretz အားရာထူးမှဖယ်ရှားရန်ဖိအားပေးမှုကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်.
ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့လိင်တူချစ်သူ Pride ချီတက်ပွဲ
ဇြန္လ 7, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဇွန်လ6ဟာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းခဲ့တယ် ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့လိင်တူချစ်သူ Pride ချီတက်ပွဲ.
ဂျူးလူမျိုးများသည်ဂျူးလူမျိုးများအားဂေးများချီတက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရန်အော်သိုဒေါက်စ်ရဗ္ဗိများကတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လိင်တူချစ်သူများ၏ဓလေ့ထုံးစံများသည်ထုံးစံရှိသည်။ မကြာသေးမီကတဲလ်အဗစ်၌ဂေးချီတက်ပွဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ ၎င်းသည်အမြဲတည်ရှိခဲ့သော်လည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ပြီးဂေးများစုဝေးရာနေရာများဖြစ်သောဂေးကမ်းခြေများ၊ လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းသည်၎င်းတို့အားဆန့်ကျင်မှုရှိကြောင်းလေးစားအသိအမှတ်ပြုပြီးသတ်မှတ်ထားသောအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
LGBT + India ရှိအောင်ပွဲ - နောက်ဆုံးအနိုင်ရခြင်းလော။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 10, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Neelkusum Kerketta	မှတ်ချက် Leave
LGBTQ + အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုမျက်နှာသာပေးသည့်အနေဖြင့်စက်တင်ဘာ 6, 2018 အိန္ဒိယအိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်မှသမိုင်းဝင်စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူများသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သက်သာမှုများဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးအနိုင်ရသလား။ ဤအချက်ကိုရောက်ရှိရန် 157 နှစ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်လက်ခံရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရ ဦး မည်လော။
2012 မှ SC သို့တင်ပြသောကိန်းဂဏန်းများအရအိန္ဒိယတွင်လိင်တူချစ်သူသန်း 2.5 ခန့်ရှိသည်ဟုဆိုရာမိမိကိုယ်ကိုလွတ်လပ်စွာလက်ခံခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲ ၀ င်နေသောလူအနည်းငယ်မျှသာရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူတို့သည်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊
အိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှု - ကုလားကာအောက်မှာမုဒိမ်းမှု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 9, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Neelkusum Kerketta	မှတ်ချက် Leave
၂၁ ရာစုခေတ်သစ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ခေတ်ကာလသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်တိုင်းပြည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးကိုနားလည်ရန်ပျက်ကွက်ဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီဖခင်အုပ်စိုးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအမျိုးသမီးတွေဟာလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ရင်တောင်လူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်နာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။
ဒီနေရာမှာငါအိန္ဒိယမှာအိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှုဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ အဲဒီမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ပုဒ်မ ၃၇၅၊ အိန္ဒိယပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ (IPC) မှာပြဌာန်းထားတယ် -“ ယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် မိမိ၏ဇနီး၊ အသက် ၁၅ နှစ်အောက်မဟုတ်သောဇနီးသည်သည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုမဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်အိမ်ထောင်တွင်အမျိုးသမီးများ၏လျစ်လျူရှုထားမှု၏အရေးပါမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပြီး၊ အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအရအိမ်ထောင်ရေးမုဒိမ်းမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနေသည်ဟုပြောခြင်းသည်မမှားပါ။
ဘာသာတရားနှင့်လိင် - အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မယားငယ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 31, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ မွတ်စလင်နှင့်ဂျူးဘာသာအယူဝါဒဖြစ်သောအနောက်နိုင်ငံများမှဘာသာကြီးသုံးခုသည်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားမြစ်သည်ဟုသဘောတူကြသည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည်မိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားသုံးခုစလုံးတွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်မြင့်မြတ်သောအခမ်းအနားဖြင့်စတင်သည်။ ဘာသာတရားများသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်မဲဆန္ဒနယ်မြေ၏ဘဝများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 18, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိင်စိတ်ဒဏ်ရာသည်ဆွေးနွေးရန်အထိခိုက်မခံသော၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများဖြစ်သော်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာများမှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါကမျှမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးများကကျွန်ုပ်သည်တခါတရံလူကြိုက်များခြင်းမရှိသောအနေအထားကိုထင်ဟပ်နေပြီး၊ စစ်တပ်သည်ရာထူးအဆင့်များအားလုံးအမျိုးသမီးများ ၀ န်ထမ်းများအားဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်
မတ်လ 13, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
၎င်းကိုယနေ့ဘာသာရေးကျောင်းများရှိကက်သလစ်ကျောင်း၊ မူဆလင်ကျောင်းများနှင့်ဂျူးနေ့ကျောင်းများတွင်လိင်၊ မိန်းကလေးကျောင်းနှင့်ယောက်ျားလေးကျောင်းများခွဲထားသည့်ဓလေ့ထုံးတမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းတွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်အတန်းများသည်သီးခြားဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ တိုင်လောကလောက၌ပင်စတီးဗိုက်ဆန့်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ဘရွတ်ကလင်းနည်းပညာကဲ့သို့သောယောက်ျားလေးများအတွက်လောကကျောင်းများရှိခဲ့သည်။
Kavanaugh Nomination နောက်ကွယ်မှ GOP အထက်လွှတ်တော်အမတ်တန်းစီ; ဒီမိုကရက်ကဆန္ဒပြမှုများကိုအရှိန်မြှင့်
အောက်တိုဘာလ 5, 2018 သြဂုတ်လ 11, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ဖြူတော်ကပြောကြားခဲ့သည် The Wall Street ဂျာနယ် FBI ကတွေ့ရှိ စွပ်စွဲချက်များ၏အတည်ပြုချက်မရှိပါ တရားရုံးချုပ်မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူ Brett Kavanaugh အားဆန့်ကျင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများ
သြဂုတ်လ 23, 2018 သြဂုတ်လ 10, 2019 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အသက်တာ၌လိင်ပconflictsိပက္ခများသည်အာဒံနှင့် Eve ၀ တို့အချိန်ကတည်းကတည်ရှိပြီးအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ယနေ့တွင်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများရှိနေသည်။ ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်သော်လည်းအတိတ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လက်မထပ်ဘဲဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။